ကြီးမြတ်တဲ့ဝိညာဉ်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလေ့လာပါ - ဘုရားသခင့ယုံကြည်ဖို့ကိုဘယ်လို
သင်၏အသက်တာကိုသင်လိုချင်သည့်လမ်းကိုသွားမခံသောကြောင့်သင်သည်အစဉ်အရုန်းကန်ခြင်းနှင့် fretted ရှိပါသလား? သင်အခုကြောင်းလမ်းခံစားရပါသလော သငျသညျဘုရားသခငျသညျယုံကြည်စိတ်ချချင်တယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကတရားဝင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အလိုဆန္ဒများရှိသည်။
သင်ပျော်ရွှင်စေမယ်လို့အရာကိုသိသင်ရကူညီဖို့ဘုရားသခငျသညျတောငျးဆို, ရှိသမျှကိုသင်၏အစွမ်းသတ္တိနှင့်အတူကအဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ ဒါပေမယ့်ကိုသင်စိတ်ပျက်ခံစားသွားမလာပါဘူးဆိုရင် စိတ်ပျက် ပင်, ခါးသော ။
တစ်ခါတစ်ရံသင်သာကပဲစိတ်ပျက်, ရှိသမျှပြီးနောက်သင်ပျော်ရွှင်စေတော်မမူကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်, သင်လိုချင်တဲ့အရာရဖို့လုပ်ပါ။
အတော်များများက ခရစ်ယာန်တွေဟာ သူတို့မှားလုပ်နေလုပ်နေအဘယ်အရာကိုအံ့သြ, ဒီသံသရာကသူတို့တစ်ခုလုံးကိုဘဝပြန်လုပ်ပါ။ ငါသိသင့်တယ်။ သူတို့ကိုငါ၏တစျခုဖွစျသညျ။
လျှို့ဝှက်ချက်ကို 'ပွုလုပျခွငျး' အတွက် Is
"ဘာ?" သငျသညျတောငျးဆိုပါတယ်။ "ဒါကအဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ပါပဲ။ ကျွန်မအတွက်အဆများစွာဖတ်ပါတယ် သမ်မာကမျြး သူဘာကိုဆိုလိုဘူး။ ဒါကြောင့်အပေါ်တရားဒေသနာအများကြီးကြားလျှင်, လျှို့ဝှက်?"
သင်တိုင်းဖြစ်ရပ်သည်ဝမ်းနည်းခြင်း, ဘုရားသခင်လုံးဝ, spotlessly ယုံကြည်စိတ်ချကြောင်းအခိုင်အမာခံယူချက်နှင့်အတူတိုင်းဆုတောင်းပဌနာရှုမြင်ကြောင်းကိုသင်၏အသက်တာ၌ထိုကဲ့သို့သောကြီးစိုးဆောင်ပုဒ်အောင်အသုံးပြုပုံအလေ့အကျင့်သို့ဤအမှန်တရားချပြီးအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်သည်မုသာ။
စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့သခင်ဘုရား၌ကိုးစားလော့ ကိုယ်ဥာဏ်ကိုအပေါ်မူတည်ပါဘူး။ သင်ပြုသမျှသော၌သူ၏အလိုတော်ကိုရှာ, သူသည်ယူရာလမ်းကြောင်းကိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။ (သု 3: 5-6, NLT )
ဒါကဘယ်မှာကျနော်တို့ရှုပ်ထွေးတက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မဟုတ်ဘဲသခင်ဘုရားထက်ဘာမှ၌ခိုလှုံချင်တယ်။ ကျနော်တို့တောင်မှတစ်လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်မှူးအတွက်သောကြောင့်ပိုက်ဆံအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သူဌေးရဲ့တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစ၌ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဝန်ယုံကြည်စိတ်ချရပါလိမ့်မယ်။
သို့သော်လည်းသခင်ဘုရား? ကောင်းပြီ ...
ဒါဟာကျနော်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်အမှုအရာ၌ခိုလှုံဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ သေချာတာပေါ့, ငါတို့ဘုရားသခင်၌ယုံကြည်ပေမယ့်သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကို run ဖို့ခွင့်ပြုသလော ဒါကကျနော်တို့ထင်ပါတယ်အနည်းငယ်လွန်းတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ခြေလိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုသည်ငါတို့အဘို့ဘုရားသခငျ၏အလိုနှင့်အတူသဘောတူမပြုစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကငါတို့အသက်င်ကြောင့်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော
ကျွန်တော်ကျော်တစ်ဦးဟုပြောဆိုရှိသည်မဟုတ်သငျ့သလော ကျနော်တို့ကရိုက်ချက်များခေါ်ဆိုသူတဦးတည်းမဖြစ်သင့်သလော ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကိုပေး၏ အခမဲ့အလိုတော် သူမဟုတ်လော
Advertising ကြော်ငြာနှင့်ရွယ်တူချင်းဖိအားအရေးကြီးပါတယ်ဘာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ: တစ်က high-ပေးဆောင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ဦးဦးခေါင်း-လှည့်တဲ့ကား, drop-သေပြီ-အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နေအိမ်နှင့်အခြားလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်စေမည်သူတစ်ဦးအိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်သိသာထင်ရှားသောအခြားအ ငြူစူခြင်းနှင့်အတူအစိမ်းရောင်။
ကျနော်တို့အရေးပါအရာ၏ကမ္ဘာ့စိတ်ကူးဘို့လဲကြလျှင်, ငါတို့သည်ငါခေါ်သောအရာကိုအတွက်ပိတ်မိနေရ "Next ကိုအချိန်များ၏ Loop ။ " အဆိုပါကားသစ်, ဆက်ဆံရေးမြှင့်တင်ရေးသို့မဟုတ်သမျှကိုသင်ရှာဖွေစောင့်ရှောက်နိုင်အောင်စဉ်းစား, သင်မျှော်မှန်းထားသည့်ပျော်ရွှင်မှုကိုဆောင်ကြဉ်းမပေးခဲ့ပါဘူး "ဒီတစ်ခါလည်းလာမယ့်အချိန်။ " သငျသညျပိုကောင်းတစ်ခုခုနှင့်နက်ရှိုင်းသောဆင်းဖန်တီးခဲ့ကြသောကြောင့်, ဒါပေမယ့်သင်ကသိကြအမြဲအတူတူပင်ရဲ့ loop တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျနောက်ဆုံးတော့သင်၏ဦးခေါင်းသည်သင်၏စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့သဘောတူရာအရပ်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာ, သင်ဆဲချီတုံချတုံပါပဲ။ ဒါဟာကြောက်စရာပါပဲ။ ဘုရားသခင်၌ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းသင်ကအစဉ်အဆက်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပွညျ့စုံတတ်၏အဘယ်သို့သောအကြောင်းယုံကြည်သည်င့်အရာအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ကြောင်းလိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာသင်သည်ဘုရားသခင်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုအဘယ်သူသိနိုင်ကြောင်းအမှန်တရားကိုလက်ခံဖို့လိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်သင်မည်သို့လုပ်နေဖို့ သိ. မှခုန်စေသလဲ? သင်မည်သို့ဘုရားသခငျသညျအစားကမ္ဘာကြီးကိုသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်စိတ်ချသလဲ?
သငျသညျအတှငျးလြှို့ဝှကျခဘဝတွေကို: အ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် ။ သူသည်သခင်ဘုရား၌ယုံကြည်ကိုးစား၏ညာဘက်သင်ပြစ်ဒဏ်ချလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူသည်လည်းသင်တို့ကိုလုပ်ကိုကူညီလိမ့်မယ်မသာ။
ဒါပေမယ့်အဘခမည်းတော်, ငါ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေပို့ပေးသည့်အခါ - အကြောင်း, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဖြစ်ပါသည် - သူသည်သင်တို့ကိုအရာရာသွန်သင်မည်သင်တို့ကိုငါပြောနှင့်ပြီအရာအားလုံးကိုသင်သတိပေးပါလိမ့်မယ်။ "- ဒီတော့ပူပသို့မဟုတ်မကြောက်ပါနဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်နှလုံးထိုအခါငါပေးမိဿဟာကမ္ဘာကြီးကိုကိုမပေးနိုငျပါလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်လက်ဆောင်တစ်ခုနှင့်အတူသငျသညျထွက်မယ်။ ။ " (ယောဟန် 14: 26-27 (NLT)
ယင်းကြောင့်, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် သင်ကိုယ်တိုင်သိကျွမ်းခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့သငျသညျကိုသိသူကသင်ဤပြောင်းလဲမှုကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်အတိအကျသင်သည်အဘယ်သို့ပေးရလိမ့်မယ်။ သူကအပြတ်အသတ်လူနာရဲ့, ဒီတော့သူကသင်ဤလျှို့ဝှက်ချက်ကိုစမ်းသပ်ပါစေလိမ့်မယ် - သခင်ဘုရား၌ယုံကြည်ကိုးစား - ကလေးလေးခြေလှမ်းပါ။ သငျသညျထိ မိ. လဲလျှင်သူသည်သင်တို့ကိုဖမ်းပါလိမ့်မယ်။ သင်အောင်မြင်လာသောအခါသူသည်သင်တို့နှင့်အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့ပါလိမ့်မယ်။
ကင်ဆာကတဆင့်သွားပြီသူတစ်ဦးသည်အတိုင်း, ချစ်ရသူ၏သေဆုံးမှု , ကျိုး ဆက်ဆံရေး နှင့်အလုပ်အကိုင်အ layoffs, ငါသည်သခင်ဘုရား၌ယုံကြည်ကိုးစားနေတဲ့ရာသက်ပန်စိန်ခေါ်မှုကြောင်းကိုသင်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျနောက်ဆုံးတော့ "ရောက်ရှိမည်။ " ဘယ်တော့မှ တစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကိုအကျပ်အတည်းသစ်တစ်ခုကတိကဝတ်များအတွက်တောင်းဆိုထားသည်။ သတငျးကောငျးပိုပြီးမကြာခဏသင်သည်ဘုရားသခင်၏မတ်ေတာလက်သင်၏အသက်တာတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်မြင်သောဖြစ်ပါသည်, လွယ်ကူဒီယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်လာသည်။
သင်တို့သည်သခင်ဘုရား၌ယုံကြည်ကိုးစားသည့်အခါကမ္ဘာ၏အလေးချိန်သည်သင်၏ပခုံးကိုချွတ်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးလျှင်အဖြစ်, သင်ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဖိအားရဲ့အချွတ်ယခုသင်နှင့်ဘုရားသခင်အပေါ်, သူသည်ဿုံကကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်သည်သင်၏အသက်တာ၏လှပသောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကထိုသို့ပြုမှသူ့ကို၌သင်တို့၏ယုံကြည်မှုလိုအပ်ပါသည်။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? စတင်ရန်အချိန်ကိုအခုဒီနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
Sadayatana သို့မဟုတ် Salayatana
ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် Gassho လက်ဟန်
ဆယ်ပါးနာမည်ကြီးဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်: သူတို့ဟာ မှစ. လာအဘယ်မှာရှိ; ၎င်းတို့ကိုယ်စားပြုသည့်အဘယ်အရာကို
"ဠာ: တစ်ဦးက Spacetime Odyssey" အပိုင်း 8 ကိုကြည့်ခြင်းအားသင်ထောက်ကူစာရွက်
ပုလင်းရေ Go ကိုမကောင်းပါသလော
တရားဝင်နှင့်အလွတ်သဘောအီတလီအကြောင်းအရာ Pronoun အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
Portfolio (ရေးစပ်သီကုံး) ရေးသားခြင်း
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: ဗိုလ်ချုပ် Winfield ဖြစ်သူ Scott Hancock ဟာ
စက်မှုတော်လှန်ရေးမှတစ်ဦးက Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်
တစ်နေ Post-Graduate တစ်နှစ်တာ၏အကျိုးကျေးဇူးများ